Andry Rajoelina : Manao Kopi-Kolé ny Fisandratana 2030 -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Manao Kopi-Kolé ny Fisandratana 2030
Foto-kevitry ny Fisandratana 2030 nampahafantarin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha tamin’ny 25 janoary 2018 ny fanandratana ity firenena ity ho tsara kokoa noho izao. « Ampy izay ny fampahantrana ny Malagasy, ka andao hasandratra ny Firenena », hoy ny Filoha tamin’izany.
Mba hahatongavana amin’izany dia ireo izay manana ny fahaiza-manao sy fahalalana mendrika no omena toerana. Ny fanjakana tsara tantana no fototra entina mitantana ny firenena amin’izany. Manomboka any amin’ny fanovana toe-tsaina dia voakasiky ny Fisandratana 2030 avokoa, mba hiova sy ho tia fandrosoana . Ny lafin’ny toekarena, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny varotra, ny teknolojia vaovao, ny famoronan’asa, ny lafin’ny fananan-tany, ny indostria sy ny fizahantany…dia efa misy lamina maty paika entina hanatsarana izany, izay voarakitra anatin’ny Fisandratana 2030.
Niaiky avokoa ny rehetra nihaino ny famelabelarana nataon’ny Filoha tamin’izany fa hitondra antsika ho amin’ny Fisandrantana tokoa ity Vina napetrany ity. Ny ampitson’iny dia nanao tohivakana ny fanohanana io Vina Fisandratana 2030 io. Hatrany am-pitan-dranomasina, toy ny tany Alemana, Paris, sns…dia nampiseho ny fahavononana hanohana izany ihany koa. Ny olon-drehetra na gasy na vazaha dia vonona hanohana io Fisandratana 2030 tarihain’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina io, ka tsy nahafaly ny Mapar izany. Tena ho lasa lavitra tokoa mantsy isika amin’io Fisandratana io. Natao daholo ny hevitra rehetra nentina nanakana an’izany , ka isan’izany io hetsiky ny depiote Mapar sy Tim etsy amin’ny 13 mey io.
Tsy vitan’izay fa mbola niezaka naka tahaka io Fisandratana 2030 io ry zareo. Amin’izao fotoana izao tokoa mantsy dia efa mihomankomana hanatanteraka hetsika mitovy amin’iny tany Iavoloha iny ry Andry Rajoelina amin’ity faran’ny herinandro ity etsy amin’ny Carlton . Hanao kopi-kolé ny fisandratana 2030. Ny olona tsy manan-kevitra toa izany tokoa ve no mbola tadiavina omena fahefana sy hitondra eto ? Tsy mba manana saina tia karokaroka fa mihanona fotsiny amin’ny fanaovana « kopi-kolé » ny tetikasan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny zavatra tsara no alain’ny olona tahaka.
Mbola tsy nisy Filoham-pirenena nahavita fotodrafitrasa betsaka mihoatra ity filoha Hery Rajaonarimampianina ity , tao amin’ny distrikan’i Toliara II misy anay, hoy ny depiote Helson Bresson, raha nanao tomban’ezaka ny zava-bita tamin’iny taona 2017 iny ...Tohiny